Mmoa ho nsɛm - Ama Kambon
Mmoa ho nsɛm
Monday, 06 April 2020 22:14
Meresua afa mmoa ho ɛne baabi a wɔretena. Wɔ abibiman mu, yɛwɔ mmoa bebree te sɛ gyata, obibiri, ɔsebɔpɔn ne ɛsono. Nnipa na ɔsono ɛse de yɛ nnuro, enti wɔn mu bebree na wɔawu. Wɔkunkum bɛnkoroɔ bebree nso. Wɔ baabi ara, te sɛ aburokyire anafoɔ anaa atifi, deɛ wɔte hɔ renkunkum mmoa na bebree ase ahye dada. Wɔn mu pii yɛ aborɔfo.
Nanso mmoa no mu bi na wɔ daso rete ase nanso gye sɛ yɛ gye wɔn nkwa ansa na wɔawu.
Wɔ asase atifi ɛyɛ nwono papa na gye sɛ mmoa hwɛ sɛdeɛ wɔbɛnya ɔhyeɛ. Mmoa bi na wɔyɛ wɔn ho atuu na ebi nso na wɔkɔda kosi berɛ a ɔhyeɛ aba. Nsuomnam nso wɔ hɔ. Oboodede taa we wɔn. Wɔn nso na yeakunkum wɔn mu bebree.
Wɔ Australia hɔ no, yɛbɛtumi ahu mmoa bi te hɔnhɔn a wɔte baabi ara ɛyɛ hye ɛne baabi a ɛyɛ nwunu.
Nanso mmoa mu bebree na wɔ daso wuwu a ɛwɔ hɔ kɔpem sɛ wɔn ase ahye.
This entry was posted	on Monday, April 6th, 2020 at 10:14 pm	and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.